ဒီလိုကောင်လေးမျိုးဆို လမ်းခွဲသင့်ပြီလား - Akhayar Media – Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
Lifestyle, Relationships	ဒီလိုကောင်လေးမျိုးဆို လမ်းခွဲသင့်ပြီလား
နှစ်သစ်မှာ အပြောင်းအလဲလေးတွေလုပ် ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ဖို့ အချိန်ပေးတော့မယ်ရယ်လို့ခေးလေးတို့ မွီးလေးတို့ တွေးဆမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ကြတဲ့အခါ Relationship တစ်ခုကိုပါ Change သင့်တာမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်။ တချို့အတွဲလေးတွေများ “ဂဏန်းညှပ်တာ လူမမြင် မိအေးအော်တာသာ လူသိ” ဆိုသလို တွဲနေရတဲ့ ကောင်မလေးကသာ စိတ်ကသိကအောက်နဲ့ မချိတင်ကဲခံစားနေရတာမျိုးရှိကြပါတယ်။ အပြစ်ကြီးကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ ရေရှည်အတွက်အဆင်မပြေတဲ့ အကျင့်လေးတွေစွဲနေတတ်တဲ့ ဘယ်လိုကောင်လေးမျိုးတွေကို နှုတ်ဆက်ဖို့ စဉ်းစားသင့်လဲ တွေးဆကြည့်မယ်ဆိုရင် . . .
ကိုယ့်ကိုပစ်ထားပြီး ဂိမ်းကိုချစ် ဂိမ်းကို တွယ်တာ ဂိမ်းကိုမြတ်နိုးနေသူဆိုရင်တော့ ရေရှည်အတွက်မကောင်းနိုင်ဘူးလေ။ ဂိမ်းထဲမှာပဲ တွေးတောကြံဆတတ်ကြပြီး ဘဝအတွက်မတွေးတော မပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ ကောင်လေးတွေကလည်း ရှိတတ်သေးတယ်။ COC ဆော့မြဲ Dota ခုတ်မြဲဖြစ်နေသူလေးလား၊ Pokemon Go နဲ့ FIFA 2015 ကိုသာ ဘဝထင်နေသူလေးလား အဘက်ဘက်ကတွေးဆပါနော်။
သူတို့ Body လှဖို့အတွက် ကိုယ့်ကို ဂရုမစိုက်နိုင်အား Gym ချည်းဘဲ သွားတတ်သူဆိုရင်တော့ ထမင်းမစားဘဲ အမိုက်စား ဘော်ဒီကြီး ထိုင်ကြည့်ပြီး ဗိုက်ပြည့်နိုင်မလား စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ ရသမျှလခလေးတွေ အဝတ်အစားဖိုး Gym ဖိုးနဲ့ကုန်နေပြီဆိုရင်တော့ ရေရှည်မှာ အဆင်ပြေနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ လှတာမက်ရင် ညစာခက်နိုင်တယ် ချစ်ဆုံးလေးတို့…။
You May Also Like :ဒီလိုကောင်မလေးမျိုးဆို လမ်းခွဲသင့်ပြီလား
ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေဘယ်မှာဖွင့်လဲ ကြည့်ပြီး သွားလာစားသောက်တတ်သူလေးတွေဆို အစားအသောက်ဖိုးနဲ့မွဲဖို့သာပြင်။ အစပိုင်းတော့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာလေးပေမယ့် ကြာလာရင် စရိတ်ထောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ပိုက်ဆံစုဖို့ထက် စားမယ် သောက်မယ် အပန်းဖြေမယ် ဆိုတဲ့အကျင့်စွဲနေသူလေးဆိုရင် အိမ်ထောင်ကျပြီး ဝင်ငွေထွက်ငွေ အဆင်ပြေ၊ မပြေ ချိန်ဆတွေးတောကြပါစို့။
Night Life ကိုမှ မက်မောပါတယ်၊ တွယ်တာပါတယ်ဆိုတဲ့ ကွီးတွေဆိုရင်တော့ ရေရှည်အတွက်ပြန်စဉ်းစားပါ ချစ်လေးတို့ရေ။ တစ်ခါတလေ မွေးနေ့ပွဲလေး ဂုဏ်ပြုစရာပွဲလေးတွေရှိလို့ သွားလာတတ်တာက အပြစ်မဆိုသာပေမယ့် ဘော်ဒါတွေ ပျော်စရာတွေနဲ့ခဏခဏ သွားလာပျော်ပါးတတ်နေပြီဆိုရင်တော့ ပြန်ထိန်းရမှာပါ။ လွင့်မျောရင်ခုန်ရတာကို ကြိုက်တဲ့အကျင့်လေး စွဲနေပြီဆိုရင်တော့ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ ဘဝခရီးအတွက် စဉ်းစားတွေးဆပြီး သံယောဇဉ်ဖြတ်သင့်ပါပြီနော်။
တချို့တွေများ ကြိုက်တာ မကြာသေး အဆင့်တွေတိုးတာ မြန်လွန်းတယ်ဆိုရင်တော့ သတိလေးတော့ထားပါ။ ပန်းဝတ်ရည်သောက်မဝတဲ့ ပျားပိတုန်းဖြစ်နေရင် ကိုယ်ကျိုးနည်းရချည့်ရဲ့နော်။ ချစ်တာထက် နစ်မွန်းစေတာက ပိုများနေမလား စဉ်းစားပါ။ တကယ်လို့များ နှာခေါင်းသမားလေး ဖြစ်နေရင် အပြုအစု အယုအယတွေ ဘာတွေ ညာတွေ သာယာမနေဘဲ မြန်မြန်စွန့်ခွာဖို့သာ ပြင်ပါတော့။
ကဲ…အခရာသူ အခရာသားတွေကတော့ လက်ပြနှုတ်ဆက်သင့်တဲ့ ကောင်လေးစာရင်းကိုပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ သူငယ်ချင်းတို့ရော ဘယ်လိုကောင်လေးမျိုးကို လက်ပြနှုတ်ဆက်သင့်တယ်ထင်မိလဲ …။
ဒီလိုကောင်မလေးမျိုးဆို လမ်းခွဲသင့်ပြီလားဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ တစ်ဦးမကောင်းလို့ တစ်ဦးပြောင်းတာက အများကဲ့ရဲ့စရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတစ်ယောက်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်လို့ အဖော်မဲ့သွားမယ်လို့ မတွေးလိုက်ပါနဲ့၊ 1 Go ၊2Come ၊…
အချိန်နှင့်အချစ်ပုံပြင်ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းပေါ်မှာ “ပျော်ရွှင်ခြင်း” ၊ “နာကျင်ခြင်း” ၊ “အသိပညာ”စတဲ့ ခံစားချက်တွေအားလုံး ပေါင်းစုနေထိုင်ကြတယ်။ “အချစ်” လည်း အပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့မှာ သူတို့နေထိုင်တဲ့ကျွန်းလေး နစ်မြုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကြေညာခဲ့တယ်။။…
ဘယ်ပန်းချီရေးလို့မမီမိခင်မေတ္တာဘွဲ့သီချင်းတွေ ပေါများလှပေမယ့် ဖခင်မေတ္တာကို ဖွဲ့ဆိုကြတဲ့သူတွေ ရှားလွန်းလို့ မိခင်မေတ္တာသာ ကြီးမားတယ်လို့ ထင်မှတ်ရပါတယ်။ သားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင် မိခင်ထက် မသာရင်သာနေမယ်၊ မလျော့တဲ့အချစ်တွေနဲ့ ပေးဆပ်နေတဲ့ ဖခင်တွေ။ ဒီသားမယား…
၅မိနစ်လောက် စောင့်ပါဦးဖေဖေလူကြီးတစ်ယောက်နှင့် မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ဟာ ကစားကွင်းတစ်ခုရဲ့ ထိုင်ခုံလေးပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း ကလေးတွေ ကစားနေတာကို ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ အားလပ်ရက်ဖြစ်တာနဲ့အညီ ကစားကွင်းမှာလည်း ကလေးတွေ အပြေးအလွှားဆော့ကစားနေကြပါတယ်။ “ဟိုမှာ ဘောင်းဘီအဖြူလေးနဲ့ ဘောလုံးကန်နေတာ…
အချစ်စစ်နှင့်စွဲလမ်းခြင်းအကြားခြားနားချက် (၄)ချက်ဆယ်ကျော်သက်တွေဘဝမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို တကယ်ချစ်တာလား ၊ စွဲလမ်းတာလား သေချာမကွဲပြားသေးခင် အချစ်လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ သမီးရည်းစားအဖြစ်သို့ လျင်မြန်စွာရောက်ကုန်ကြပါတယ်။ ရည်းစားဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ကွဲကြပြဲကျဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ တကယ်တော့ စွဲလမ်းမှုကို အချစ်လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး…
နှစ်ထောင့်ဆယ့်ခွန် ဆော်လမ်းညွှန်Single ဘဝဆိုတာက ဒဿနဆန်ဆန်ပြောရမယ်ဆိုရင် အတွင်းခံဘောင်းဘီမဝတ်ဘဲနဲ့ လမ်းလျှောက်နေသလိုပဲ။ လွတ်လပ်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ အထိန်းအကွပ်မရှိတော့ ဟာတာတာကြီးဗျ။ နံပြားတောင် အနံ့မပါရင် ပီဇာမှတ်ပြီးစားတတ်တဲ့ ဆော်လေးတွေကို လိုက်ရတာလည်း…
Snapchat ရဲ့ Camera Feature တွေကို “ငှားသုံးလိုက်တဲ့” WhatsApp	Kyaw Soe Aung
Facebook ၊ Instagram ၊ Messenger တို့ဟာ SnapChat ရဲ့ နည်းပညာကို ကူးယူထားရုံသာမက WhatsApp’s ရဲ့ Camera Feature မှာလည်း SnapChat ရဲ့ နည်းပညာကို ကူးယူထားပြန်ပါပြီ။ မတ်ခ် ဇူကာဘတ် ဟာ SnapChat ကို ဝယ်ယူဖို့ မအောင်မြင်သေးတာကြောင့် SnapChat ဆီမှ ကောင်းနိုးရာရာ Feature များကို ၄င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ Facebook ၊ Instagram ၊ Messenger ၊ WhatsApp ဆီမှာ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ WhatsApp ရဲ့ Camera Feature အသစ်မှာတော့ ဓာတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယိုများကို […]
Articles Paing AK Tech
Apple ရဲ့ iOS 10.3 မှာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေ ပါဝင်လာသလဲ?	akhayaradmin
Apple ကုမ္ပဏီကတော့ iOS အသုံးပြုသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေ ပြန်လည်ပြုလုပ်ထားတဲ့ iOS 10.3 ဗားရှင်းကို ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ iOS 10.3 မှာတော့ Find My AirPods လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ၊ အသုံးပြုရတာ ပိုမိုအဆင်ပြေလာတဲ့ CarPlay ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ Apple ရဲ့ အဓိက ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တဲ့ File System ကို ၃၁ နှစ်ကျော်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ Hierarchical File System (HFS+) ကနေ Apple File System (APFS) ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုက်မှုတွေပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ Find My iPhone iOS 10.3 […]
Google Home နဲ့ Amazon Echo တို့ရဲ့ စကားစမြည်	Joker
Machine Learning စပီကာတွေဖြစ်တဲ့ Amazon Echo နဲ့ Google Home တို့ဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စကားပြောနိုင်တယ်ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်လိုက်ပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်က Adam Jakowenko ဆိုသူက YouTube ပေါ်မှာ တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ Echo ကို Calendar လုပ်ပြီးတော့ Alexa ဆိုတဲ့နာမည်ခေါ်ပြီး အမိန့်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ပြန်ဖြေတဲ့ အဖြေထဲကို Hey Google ဆိုတဲ့ နာမည်ထည့်ထားပြီး Google Home ကို ဖြေစေကာ Google Home ရဲ့အဖြေမှာလည်း Alaxa လို့ထည့်ခေါ်ခဲ့တာကြောင့် Loop ဖြစ်ပြီး နှစ်ယောက်က မဆုံးနိုင်အောင် အပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြတာပါ။ အရင်ဆုံး […]
အသစ်အဆန်းတွေမပြနိုင်ဘဲနဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ နီနီခင်ဇော်	Ju Jue
ရန်ကုန်မြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲမှာ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ တေးသံရှင် နီနီခင်ဇော်က ထိုဖျော်ဖြေပွဲပုံစံမျိုး အခြားမြို့တွေမှာ ပြုလုပ်ဖို့အတွက် အိုင်ဒီယာအသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ပြင်ဆင်ပြီးမှသာ ပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “နီနီက တစ်နှစ်ကို One Lady Show တစ်ပွဲလောက်ပဲ ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တယ်။ နီနီရဲ့ One Lady Show ဆိုရင် ခြောက်လလောက် အချိန်ပေးပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာပါ။ ပရိသတ်တွေကို အသစ်အဆန်းတွေ ထပ်မပြနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ နီနီ ရှိုးမလုပ်ချင်ပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာ လုပ်ခဲ့သလိုပုံစံမျိုးကို နောက်ထပ်မြို့တစ်မြို့မှာ ထပ်လုပ်ရင်လည်း ကြည့်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ရိုးသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် ထူးထူးခြားခြားဖန်တီးမှုတွေ ထပ်ပြနိုင်မှပဲ One Lady Show လုပ်မှာပါ။ နီနီ တစ်နှစ်လောက်တော့ အချိန်ယူရပါဦးမယ်”လို့ […]
အမှားဆိုတာ ကြောက်စရာလား	Kyaw Soe Aung
မှားမှာကို ကြောက်တဲ့ စိတ်က အပြစ်တင်ခံရမှာကို ကြောက်တဲ့ စိတ်ကနေ စတင်တယ်လို့ ကျွန်မအနေနဲ့ ယူဆမိတယ်။ ဒါကလည်း အသစ်အစမ်း တစ်ခုခု လုပ်မယ့် သူတွေကို အများစုက ‘မှားသွားလိမ့်မယ်နော် ရမ်းမလုပ်နဲ့ …လုပ်နိုင်တာလဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့…`ဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့`ဒါမှားရင်တော့ ဘ၀ပျက်ပြီ…ဘာမှတ်လဲ`ဆိုတဲ့ အပျက်သဘောပါဝင်နေတဲ့ စကားတွေ အပြစ်တင်သံတွေကြောင့်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မအမြင်မှာတော့ မှားမယ်နော်…ဆိုတဲ့ အဲဒီလိုခြိမ်းခြောက်စကားတွေက လူတွေရဲ့ အောင်မြင်လိုစိတ်နဲ့ စွမ်းရည်တွေကို ရိုက်ချိုးပစ်လိုက်တဲ့ စကားတွေ၊ အပြစ်တင်တတ်တဲ့ လူတွေက လူတွေရဲ့ အကောင်းမြင်စိတ်ကို ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ သူတွေလို့ပဲ နားလည်မိတယ်။ ကျွန်မမှာလည်း အမှားတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိပါတယ်။ အရှုံးတွေ ရှိတာပါပဲ။ ကျွန်မဘဝမှာ အားလုံးကို ခြုံပြီး သုံးသပ်ရရင်တော့ […]
အသည်း အားကောင်းစေတဲ့ အစားအစာ (၅) မျိုး	Kyaw Soe Aung
အသည်း အားကောင်းစေတဲ့ အစားအစာ (၅) မျိုး အသည်းဆိုတာ ကိုယ်စားသောက်လိုက်တဲ့ အစားအစာများကို အစာခြေရည်ထုတ်ပေးပြီး ခြေဖျက်ပေးရုံသာမက ရရှိလာတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို သိုလှောင်ပေးတဲ့အပြင် အဆိပ်အတောက်တွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးရပါသေးတယ်။ အသည်း အားနည်းလာပြီဆိုရင် စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကျဆင်းလာပြီး လူဟာ လေးလံထိုင်းမှိုင်းလာပြီး အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ရန်ရှာတတ်ပါတယ်။ အသည်းရောဂါရှင်များနှင့် အသည်းအားနည်းသူများအတွက် အသည်းအားကောင်းစေတဲ့ အစားအစာ (၅) မျိုးကို ကျန်းမာရေးဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်ဖြူဟာ အသည်းမှ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားစေတဲ့ အင်ဇိုင်း (Enzymes) များကို ထုတ်ပေးရုံသာမက အယ်လီစင်ဒြပ်ပေါင်း (Allicin Compound) နှင့် (Selenium Compound) များကို ထုတ်ပေးစေတဲ့အပြင် အသည်းကို […]
စကီလေး မသိအောင် ဒါတွေကို လျှိုထားလိုက်ပါ	Kyaw Soe Aung
ဘာပဲလုပ်လုပ် ပွင့်လင်းတာကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အိမ်သာတက်ရင်တော့ တံခါးပိတ်ရတာပဲမလား။ အဲဒီတော့ အသိခံလို့မဖြစ်တဲ့ တချို့ဟာတွေကို စကီလေးရှေ့မှာ တုတ်ထိုးအိုးပေါက်သွားပြောရင်တော့ ရွှေစိတ်တော်ညှိုးပြီး အရစ်တော်ခံမှာ သေချာပြီမှတ်။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုစကားမျိုးတွေကို ဒိုင်လျှိုထားရမလဲဆိုတာကို တစ်ခုချင်းပြောပြမယ်ဗျ၊ စာအုပ်နဲ့သေချာလိုက်မှတ်၊ ဒါပဲ။ ၁။ ရည်းစားဟောင်းအကြောင်း မထိကောင်း။ စကီလေးရှေ့မှာ ကိုယ့်ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းတွေကို ယောင်လို့မှ မဟမိစေနဲ့နော်။ ကိုယ့်ထားခဲ့တဲ့ ရည်းစားတွေက အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်တစ်သင်းစာလောက် ရှိနေပါစေ၊ စကီလေးရှေ့မှာတော့ “သူငယ်နှပ်စား” ပုံစံနေပြလိုက်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ “ခိုခို အရင်ရည်းစားတုန်းက တော်တော်ချစ်ခဲ့တာလား၊ ဘယ်လောက်ကြာအောင် တွဲခဲ့တာလဲ၊ ဘယ်အဆင့်ထိ ရောက်ခဲ့သေးလဲ၊ ခေးနဲ့သူ ဘယ်သူ့ပိုချစ်တာလဲ ဟင့်ဟင့် ပြောနော် ဟီးအီးအီး” ဆိုပြီး ချွဲနေရင် ကိုယ့်မှာ ချော့နေရတာနဲ့တင် […]
၂၈နှစ်မှာ အငြိမ်းစားယူသွားတဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးမလေး JP Livingston	Kyaw Soe Aung
ဂျေပီ လစ်ဗင်စတွန် (JP Livingston) ဟာ ၂၈နှစ်အရွယ်မှာတင် အလုပ်အနားယူပြီးတော့ ဒေါ်လာ ၂သန်းနဲ့ ဇိမ်ကျလို့နေပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဒေါ်လာ၂သန်းထဲမှာ ၁.၂သန်းကို အသားတင်စုဆောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ဝ.၈သန်းကိုတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နေရာကနေ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ဝင်တဲ့အချိန်ကနေ ဝင်ငွေရဲ့၇ဝရာခိုင်နှုန်းကို စုဆောင်းနိုင်ခဲ့လို့ အခုလို နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃ဝမပြည့်ခင်မှာ သန်းကြွယ်သူဌေးမလေး ဖြစ်နေတဲ့ လစ်ဗင်စတွန်ဆီကနေ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ပက်သက်လို့ ဘာတွေသင်ယူလို့ရမလဲဆိုတာ Akhayar ကနေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အသုံးစရိတ်ကို တတ်နိုင်သလောက် လျော့ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ကုန်ကျနိုင်တဲ့ အသုံးစရိတ်ကို တတ်နိုင်သလောက် လျော့တဲ့သဘောပါ။ အပြင်ထွက်တဲ့အခါ ရေသန့်ဘူး ဝယ်သောက်မယ့်အစား အိမ်ကနေ ရေသန့်ဘူး ယူသွားတာမျိုးပေါ့။ ပြီးတော့ ၁ဝသိန်းလောက်ရှိတဲ့ iPhone […]
News Paing AK Tech
အစွန်းရောက်နဲ့ အကြမ်းဖက် Content တွေကို တိုက်ဖျက်မယ့် YouTube	Joker
လတ်တလောတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ YouTube, Facebook, Twitter တို့အပါအဝင် တခြားအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကို တစ်ဖန်ပြန်ပြီး အလင်းပြလိုက်သလိုပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းက Financial Times သတင်းစာကြီးကနေ ထုတ်ဖော်ခဲ့မှုတစ်ရပ်အရ YouTube ရဲ့ ဒုဥက္ကဌဖြစ်သူ Kent Walker ဟာ YouTube အနေနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ အကြမ်းဖက်လှုံဆော်မှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက်တိုက်ဖျက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေပါဝင်တဲ့ Content တွေကို အလိုအလျောက် ခွဲခြားစိတ်ဖြာပေးနိုင်မယ့် နည်းပညာကို ပိုမိုအသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပြီး “ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ‘content classifiers’ လို့ခေါ်တဲ့ Content တွေကို ပိုမိုလျှင်မြန်ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှား အတည်ပြုပေးနိုင်မယ့် နည်းပညာအတွက် Machine […]
ပူစီလေးတွေကို ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ အစားအစာ	Kyaw Soe Aung
ခွေးချစ်သူ၊ ကြောင်ချစ်သူတွေဟာ အချစ်တော်လေးတွေကို စားအတူ၊သွားအတူ လက်ထဲကမချဘဲ ကိုယ်စားသောက်နေတဲ့ အစားစာတွေကိုတောင် ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်စားနေတဲ့ အစားအသောက်တွေဟာ ကြောင်နဲ့မတည့်ရင်တော့ အချစ်တော်လေးတွေ ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကြောင်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲံ အစားအစာ (၁ဝ) မျိုးကို Akhayar ကနေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁) စပျစ်သီးခြောက် စပျစ်သီးခြောက်ဆိုတာက လူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးသင့်တင့်ပေမယ့် ကြောင်တွေအတွက် အန္တရာယ်များတဲ့ အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ စပျစ်သီးခြောက် လက်တစ်ဆုပ်စာလောက်ကို ကြောင်ကို ကျွေးမိလိုက်ရင်ပဲ ကျောက်ကပ်ကို အဆိပ်ဖြစ်စေပြီးတော့ အသက်ဆုံးပါးနိုင်ပါတယ်။ (၂) ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်နီမှာ ပါဝင်တဲ့ ဆာလ်ဖာအောက်ဆိုဒ်နဲ့ ဒိုင်ဆာလ်ဖိုဒ်တွေဟာ ကြောင်တွေရဲ့ သွေးနီဥတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါတယ်။ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ အဆာပြေအစားအစာ (Snack Food) […]